Handsome woman နှင့် Pretty man - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on July 22, 2011 at 10:33 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခဲ့တဲ့တစ်လျောက်လုံးရုပ်ရည်ရူပကာချောမောတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ ယောက်ျားလေးဆိုရင် handsome မိန်းကလေးဆိုရင် pretty လို့သုံးရတယ်ဆိုလို့ မှတ်သားမိခဲ့ကြမှာ ပါ။ ဝေါဟာရဆိုတာကလည်း သင်္ချာညီမျှခြင်းလို ပုံသေ သတ်မှတ်ဖို့အခက်သားကလား။ စာရေးတဲ့သူ မိမိပြောလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရောက်အောင် တစ်ခါတစ်လေ တင်စားချက်နဲ့ သုံးကြတဲ့အခါ စကားလုံးတွေနဲ့ ကျား/မ ဆက်စပ်မှုဟာ နေရာရွေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို pretty man လို့အခေါ်ခံ ရတာဟာ
နည်းနည်းစော်ကားသလိုဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာစကားမှာလည်း မိန်းမချော ချောတယ် လို့ သုံးလေ့ရှိတယ်မဟုတ်လား။ တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေကျတော့ မိန်းကလေးတွေထက်ကို ချောနေတဲ့အခါ ကွယ်ရာမှာ pretty man လို့အခေါ်ခံရတတ်တယ်လေ။ ဥပမာအားဖြင့် အခုတကော အင်မတန်နာမည်ကြီးနေတဲ့ Justin Beieber ကို တစ်ချို့က pretty boy လို့ခေါ်ကြသလိုပေါ့။ M2M ရဲ့ pretty boy သီချင်းကိုလည်း ကြားဖူးကြမှာပါ။
ဒီလိုပဲ handsome ကို မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တွဲသုံးလိုက်တဲ့အခါ မိန်းကလေးလို သွယ်လျနွဲ့နှောင်းမနေဘဲ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆက်ပြေပြစ်တဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အသွင် မြင်ယောင်လာပါလိမ့်မယ်။ အောက်စဖို့ အဘိဓာန်မှာ ဒီလို ရှင်းပြထားပါတယ်။
adjective (handsomer, handsomest)
1 (ofaman) good-looking.
(ofathing ) well made , imposing, and of obvious quality:handsome cookery books
ဆိုတော့ သာမန်သမရိုးကျလှတာထက် ပိုတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအဆက်၊ ဂုဏ်သရေ၊
ကျက်သရေရှိမှု၊ ခန့်ညားမှု ဆိုတဲ့ အရာတွေမြင်ယောင်လာပါတယ်။ She'saHandsome Woman ဆိုတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိသေးတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Katherine Hepburn တို့၊ Meryl Streep တို့ Jeniffer Lopez တို့ကို handsome ဖြစ်တယ်လို့ တစ်ချို့ကမြင်ကြ တယ်လေ။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက handsome ဆိုတဲ့စကားလုံးကို စာရေးဆရာမ Jane Austen က အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်တစ်ချို့အတွက် မကြာမကြာသုံးလေ့ရှိဖူးတယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော်ဝတ္ထု Pride and Prejudice ထဲမှာ ဇာတ်ကောင် Mr Bingley က Elizabeth Bennet ကိုahandsome woman လို့သုံးထားတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်တော့ စကားလုံးဆိုတာသုံးစွဲသူရဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့တနည်းနည်းဆက်စပ်နေ တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်နေရာရာမှာ အမြီးအမောက်မတည့်တဲ့ အသုံးအနှုံးကိုတွေ့လိုက်လို့ ဒါမှားနေတယ်လို့ တန်းပြီးကောက်ချက်မချ လိုက်ပါနဲ့ဦး။ စာရေးသူ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို သုံးရသလဲ ဆိုတာ နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားပေးလိုက်ပါဦးဟု တိုက်တွန်းရင်း ကိုယ်တိုင်လည်း ဝေါဟာရတို့၏ အဓိပ္ပါယ်အတိမ်အနက်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာပါတော့တယ်။
Attractive – Butt Ugly – Cute – Eye catching – Foxy – Fugly – Gorgeous – Good looking – Hideous – Hot – Revolting – Striking – Stunning – Unattractive
Permalink Reply by Mg Moe on July 22, 2011 at 13:22
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ခုလို ဗဟုသုတဖြစ်စရာတွေတင်ပေးတဲ့အတွက်..
Permalink Reply by tun lwin on July 22, 2011 at 14:11
Right, feeling and usage interrelate.Sound also depends on feeling. Feelings and ideas should influence words and we went on, are going on and will go on the way till end but words not us. How about it?
Permalink Reply by Emmo Lay on July 22, 2011 at 14:33
Permalink Reply by ohnmar on July 22, 2011 at 14:44
Permalink Reply by winnweaye on July 22, 2011 at 14:49
အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခုလိုမသိသေးတာများကို ညွှန်ကြားပေးတဲ့အတွက်.............
Permalink Reply by 3p4fe67hilot5 on July 22, 2011 at 15:01
Permalink Reply by 1oes8dy2o2813 on July 22, 2011 at 15:14
Permalink Reply by Thin Thin Aye on July 22, 2011 at 15:54
You are smarter than our university day. ( don't mean u are notasmart student at University;)
Appreciate your interesting explanation and presentation for the usage of these two words.
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on July 22, 2011 at 16:32
ha ha, I have more time these days. less stress :-)
Permalink Reply by Aye Thiri San on July 22, 2011 at 15:58
Permalink Reply by Aung Hlaing Tun on July 22, 2011 at 16:09
Permalink Reply by cherrylwin on July 22, 2011 at 16:14